Polarized Sunglasses dzevakadzi Lombard Dema / Dema - Hanukeii
Hatina kukwanisa kuunganidza muunganidzwa wakafemerwa weCalifornia tisina kurova mugwagwa unozivikanwa kwazvo muSan Francisco: Lombard Mugwagwa.
Isu takafarira uyu mugwagwa wekuda kuziva, semunhu wese anoushanyira, kune ayo akasarudzika uye epakutanga zigzag dhizaini. Makona masere anoumba mugwagwa akakomberedzwa nemaruva akagadzirwa nemaruva, uye pfungwa dzedu dzakafungidzira ese maCalifornia skaters nema skater aigona kuburuka Lombard ST. Kudzidzira mafambiro ake uye nekuvandudza mashandiro ake, uye mumifananidzo inoshamisa inogona kutorwa zvese kumusoro uye kubva pasi penzira.
Isu takakatyamadzwa zvikuru nenyaya yekuti mugwagwa wakazara zvakakwana pamwe nekuteedzana kwemakorivhi enguva dzose uye nekuwedzera kupfupi, kuburikidza nemota dzinotenderera pasina kuratidza dambudziko, akakunda uye ndiyo imwe yenzvimbo dzinokwezva dzevashanyi dzeSan Francisco. Isu takazoziva ipapo kuti iyo miganho yekugadzira uye yekutanga yakanyangarika uye kuti chero zano, kunyangwe zvingaite sezvisingagone, rinogona kuitwa uye, uyezve, kubudirira.
Lombard Street yakatibatsira, kwete kuuya neakasarudzika uye asina kufunga dhizaini, asi kutikurudzira kuvandudza uye kuve vakasiyana, uye kuvimba pasimba remazano akanaka. Dhizaini yeyedu LOMBARD girazi remagirazi muunganidzwa rinotanga kubva pano, kwataida kupa mapoinzi ekurudziro; Kune rimwe divi, isu taida kuripa rakakura dhizaini uye kurishongedza nerunakohwira rakafemerwa neyakaitika yeiyo mamodheru eAmerican ema60. Kubata kwe retro kwakaratidzika kuve kwakakosha kupedzisa kupa kwedu mamodheru hunhu.
Tinofungidzira Audrey Hepburn kufamba munzira ine mukurumbira muSF uchipfeka magirazi eLOMBARD mune yakasviba nechena.